မေ ၆, ၂၀၁၈ - ၉:၀၄ ညနေ News Code : 892308 Source : ABNA Link:
(၁) မေး ။ ။ ရိုဇဟ် ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် ကို ဖော်ပြပါ ။
ဖြေ ။ ။ ရိုဇဟ် ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) အမေး။ ။ ဘာအတွက်ကြောင့် ၎င်းကို ရိုဇဟ် လို ခေါ်ရပါသနည်း ?
အဖြေ။ ။ အကြောင်းမှာ ဤအေဗာဒသ်သည် ညတွင် ပြုလုပ်ရတာ မဟုတ်ပဲ နေ့ တွင် ပြုလုပ်ရပါသည် ။ နေ့ ကို (ဖွာရစီဘာသာဖြင့်) ရိုဇ် လို ခေါ်ပါသည် ။ ဤအတွက် ကြောင့်ရိုဇဟ် လို့ခေါ်ပါသည် ။
(၃) မေး ။ ။ ရိုဇဟ် ၏ အမျိုး အစားမည်မျှ ရှိပါသနည်း?
ဖြေ။ ။ ရိုဇဟ် အမျိုး အစား ၄ မျိုး ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဇဟ် ၏ အမျိုး အစားလေးမျိုး
(၄) အမေး။ ။ ဤအခြေအနေကို ဘယ်လို သိနိုင်မှာလဲ ?
(၄) အမေး။ ။ ဤအခြေအနေ တွင် ဘယ်သူစကား ကို အတည်ပြုရမည် နည်း ? ကျွန်တော် လား? (သို့မဟုတ်) ဒေါက်တာ လား ?
အဖြေ။ ။ အသင်၏စကား ကိုအတည်ပြုရပါမည်။ အသင်အနေဖြင့် မိမိ ၏ စိတ်ချ ယုံကြည်မှု အပေါ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ရပါ မည်။
(၆)မေး ။ ။ ဝါဂျစ်ဗ် ရိုဇဟ်များ ကို ဥပမာ ပေး၍ ပေးပြပါ။
ဖြေ ။ ။ ဝါဂျစ်ဗ် ရိုဇဟ်များ ၏ ဥပမာ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) အမေး။ ။ ရိုဇဟ် အတွက်နီယသ် ပြုရင် အရေးကြီးပါသလား?
အဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ရိုဇဟ်ဆိုတာ အေဗာဒသ် ဖြစ်ပါတယ်။ အေဗာဒသ် အတွက် နီယသ် မပြုဘဲ မဖြစ်နိုင်ချေ။
(၈) ။ အမေး:နီယသ်ဆိုတာ ဝါကျအချို့ ပြောတာကိုခေါ်ပါသလား?
(၉) အမေး။ ။ ဤ အဓိဋ္ဌာန် သည်မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသနည်း ?
အဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်မျိုး • နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ် အဇါန်အချိန် မှ စပြီးမဂ်ရိဗ် နမာဇ် အဇါန် အချိန် အထိ • ရိုဇဟ် ထားပါတယ် • ကိုရ်ဘသန်အေလ္လာဟ် ( قربةًاِلی الله)
(၁၀) အမေး။ ။ ကိုရ်ဘသန်အေလ္လာဟ်( قربةًاِلی الله)ဆိုတာ ?
(၁၁) အမေး။ ။ နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ် အဇါန်အချိန်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ? နမာဇ် အချိန် ရောက်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာ မှ ကျွန်တော်တို့ ရက်ကွက် တွင် ရှိဗလီမှာ အဇါန်ပေးပါ တယ်။ ကျွန်တော်ရိုဇဟ် ၎င်းအဇါန် အချိန်က နေ စတာ ဟုတ်ပါသလား?
အဖြေ။ ။ မဟုတ်ပါ။ နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ် အဇါန်အချိန်ဆိုတာ ဖဂျရ်နမာဇ် ၏ ပထမဆုံးအချိန် ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂) အမေး။ ။ ထားမည့်ရိုဇဟ် မည်သည့် အမျိုးအစား ရိုဇာ ဖြစ်ကြောင်း ရည်ရွယ်ဖို့ အရေးကြီး ပါသလား ? မရည်ရွယ်ဘဲ ရိုဇာထားလိုက်မည် ၊ပြီးမှ မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့် ဤ ရိုဇဟ်သည် ကဇွာ ရိုဇဟ် (သို့မဟုတ်) ကဖွာရာ ရိုဇဟ် ဟု ရည်ရွယ်လို့ရပါသလား?
အဖြေ။ ။ မရပါ။ ရည်ရွယ်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဤရိုဇဟ်သည် ကဇွာ ရိုဇဟ် ဖြစ်ပါတယ်၊ (သို့မဟုတ်) ကဇွာရိုဇဟ် (သို့) အခြားရိုဇဟ် တစ်ခုခု ဖြစ်ကြောင်း ရည်ရွယ်ရပါမယ်။
(၁၃) အမေး။ ။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် မနက်ဖန် လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ၁၅ရက်လား (သို့မဟုတ်) ၁၆ရက်လားဆိုတာကိုမေ့သွားပါတယ်။ ဤအတွက် ရိုဇဟ် အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါသလား ?
ဖြေ။ ။ မရှိပါ။ ဤအတွက်ကြောင့် ရိုဇဟ် အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မဖြစ်ပါ။
(၁၄) အမေး ။ ။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် အခုအချိန်ထိ မနက်ဖန် ရိုဇဟ် ထားဖို့ နီယသ် မပြုရသေးပါ။ ကျွန်တော် ဘယ်အချိန်အထိ နီယသ် လုပ်နိုင် ပါသနည်း ?
၁၅ ။ မေး ။ ။ နီယသ်ဘယ်လိုချည်ရပါသလဲ ?
ဖြေ ။ ။ မွတ်စ်စဟဗ်ရိုဇဟ် ဆိုလျှင် နံနက်အဇါန် မတိုင်ခင် အလျင်ဆို နီယသ် ချည်နိုင်သည်။ ဇဟိုရ်အချိန်မတိုင်ခင်(တမင်တကာနောက်ကျအောင်ပြုမည်။)ဆိုလျှင် နီယသ် ချည်နိုင်သည်။
ဇဟိုရ်အချိန်မတိုင်ခင်(မေ့သွားသည်၊သတင်းမရှိ ဆိုလျှင် နီယသ် ချည်နိုင်သည်။
ဇဟိုရ်အချိန်ပြီးနောက် ဆိုလျှင် နီယသ် ချည်နိုင်သည်။
အကယ်၍သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းထားရသည့်ဝါဂျစ်ဗ်ရိုဇဟ်၊ဥပမာ•လမြတ်ရမ်တွာန်၏ရိုဇဟ်• အချိန်သတ်မှတ်၍သစ္စာဆိုထားသည့်ရိုဇဟ် ဆိုလျှင် နံနက်အဇါန် မတိုင်ခင် အလျင်ဆို နီယသ် ချည်နိုင်သည်။
ဇဟိုရ်အချိန်မတိုင်ခင်(တမင်တကာနောက်ကျအောင်ပြုမည်။)ဆိုလျှင် နီယသ်မ ချည်နိုင်ပါ။
ဇဟိုရ်အချိန်ပြီးနောက် ဆိုလျှင် နီယသ် မချည်နိုင်ပါ။
အကယ်၍ သတ်မှတ်ချိန်မရှိသည့် ဝါဂျစ်ဗ်ရိုဇဟ်၊ဥပမာ•ကဇွာရိုဇဟ်•အချိန်မသတ်မှတ်ပဲ
သစ္စာဆိုထားသည့်ရိုဇဟ် ဆိုလျှင် နံနက်အဇါန် မတိုင်ခင် အလျင်ဆို နီယသ် ချည်နိုင်သည်။
(၁) :ရှအ်ဗာန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ကုန်သွားပြီး၊လမြင်၊မမြင် မသိရသေး ချေ။ ကျွန် တော်ဘာလုပ်ရပါမည်နည်း ?
(၁၆)မေး ။ ။ ရိုဇဟ်ကိုပျက်စေသည့်အရာများကိုပြောပြပေးပါ?
ဖြေ။ ။ ။ ရိုဇဟ်ကိုပျက်စေသည့်အရာများ မှ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃- အလ္လာဟ် ၊ တမန်တော်မြတ်များ () ၊ မအ်စူမီးန် (:) မမိန့် မပြော သည့် အရာကို မိန့်သည် ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောခြင်း
(၁၇) မေး။ ။ ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အချို့ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကိုလည်း သိပါရစေ ?
ဖြေ ။ ။ ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အချို့ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက် မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သွားကြားညှပ်နေသည့် အချို့ အရာ များကို တမင်တကာ စားမည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါ သည်။
၂။ မေ့ပြီး တစ်ခုခု စားမိမည်၊ သောက်မိ မည်ဆို လျှင် ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
၃။ တမင်တကာ တံတွေမျိုချမည်ဆိုလျှင်ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
၄။ အရသာရှိသည့် စားဖွယ် သောက်ဖွယ် များကို မြင်ပြီး သွားရည်ကြ မည်၊ ပြီး နောက် သွား ရည်များ ကိုတမင်တကာ မျိုချလိုက်မည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
၅။ ချွဲသလိပ် ပါးစပ် တွင် မရောက်မီ မျိုချ မိလျှင် ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
(၁၇) ရိုဇဟ်ထားပြီး ဆေးထိုးပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ရိုဇဟ်ထားပြီး ဆေးထိုးပိုင်ခွင့် ရှိမရှိ အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။- ဖျားနေချိန် ဆေးအဖြင့် ထိုးရန်- ထိုးခွင့်ရှိပါသည်။
၂။ ကိုယ်ခန္ဓာအချို့နေရာကို ထုံဆေး ထိုးဖို့ အတွက် - ထိုးခွင့်ရှိပါသည်။
၃။ ၃-အားပြတ်နေ၍ (သို့) ငတ်မွတ်မှုကို ဖြေ သိမ့်ရန် ဆေးထိုးမည် (အားဆေး သွင်း မည်) - ထိုးခွင့်ရှိပါသည်။(ခူဝီး၊စစ်သာနီ)ထိုးခွင့်မရှိပါ။(အဲဟ်သေယာသ်ဝါဂျစ်ဗ်အရ) (ခိုမေနီ၊ခါမေနာအီ)
(၁၈)မေး ။ ။ ဆေးစက် အဖြင့် သုံးခြင်း ကိစ္စ ကိုလည်း သိခွင့်ပေးပါခင်ဗျား ?
ဖြေ။ ။ ဆေးစက် အဖြင့် သုံးခြင်း ကိစ္စ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးအဖြင့် ၎င်း (သို့) အားဆေးအဖြင့် ၎င်း သုံးမည်ဆိုလျှင် - ခွင့်ရှိပါသည်။(ခူဝီး၊စစ်သာနီ)
(၁၉) မေး ။ ။ သွားဖုံးမှ သွေးထွက်ခြင်းကိစ္စကိုလည်း သိလိုပါတယ် ?
ဖြေ။ ။ သွားဖုံးမှ သွေးထွက်ခြင်းကိစ္စ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်
(၁၉) မေး ။ အာလုပ်ကျင်းခြင်း ကိစ္စကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ?
ဖြေ ။ ။ အာလုပ်ကျင်းခြင်း ကိစ္စ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၀) မေး ။ ။ သွားများကို ကုသခြင်း ကဏ္ဍလည်း သိခွင့်ပေးပါ?
ဖြေ။ ။ သွားများကို ကုသခြင်း ကဏ္ဍ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၂၁) မေး ။ ။ ကျန် အရေးကြီးကိစ္စ များကိုလည်း ခေါင်းစဉ်များ တတ်၍ ရှင်းပြပေးပါ? ကျနော်တို့ အတွက် လိုအပ်မည့် ကိစ္စများ ကဏ္ဍ များဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ကျန် အရေးကြီးကိစ္စ များကိုလည်း ခေါင်းစဉ်များ တတ်၍ အောက်ပါအတိုင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်။
၃- အလ္လာဟ် ၊ တမန်တော်မြတ်များ (အ.စ) ၊ မအ်စူမီးန် (အ.စ) မမိန့် မပြော သည့် အရာကို မိန့်သည် ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောခြင်း
(3) မအ်စူမီးန် (အ.စ) မှတစ်ပါးပါး ကို မပြောသည်ကို ပြောသည် ဟု လိမ်ပြောခြင်းသည် ပို၍ အပြစ်ကြီးပါသည်။
အဖြေ: အလ္လာဟ် ၊ တမန်တော်များ (အ.စ) နှင့်မအ်စူမီးန် (အ.စ) ၎င်းတို့ဖက်မှ မပြောဘဲ ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောလျှင် ၎င်း၏ ရိုဇဟ်ပျက်ပါသည်။
(8) ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ခေါင်းကို ဖုံးထားမည် ၊ Swimming cap ဝတ်ပြီးရေ အောက် သွားမည်၊ ရေငုပ်သဘောင်္ဖြင့်ခရီးသွားလျှင် - ဤအခြေအနေများအားလုံးတွင်ရိုဇာ ပိုင်ပါသည်။
ရမ်တွာန်လမြတ် ၏ရိုဇဟ် ဆိုလျှင် (သို့မဟုတ် ) ရမ်တွန်လမြတ်၏ ကဇွာရိုဇဟ် ဆိုလျှင် - ) ရိုဇာမပိုင်ချေ ။
မွတ်စ်သဟဗ် ရိုဇဟ်ဆို လျှင် : ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
အဖြေ:(ထိုနေ့မှစ၍သတိရသည့်နေ့အထိ)ရိုဇဟ်အားလုံးနှင့် (ထိုနေ့မှစ၍ သတိရသည့်နေ့အထိ) နမာဇ်အားလုံး - ကဇွာဖြည့်မည်။
(၂၂) မေး ။ ။အထွေအေထွ ဥပဒေများလည်း ရှိသေးပါသလား ? ကျေးဇူးပြု၍ ဖော်ပြပေးပါ ခင်ဗျား ?
ဖြေ။ ။ (၂၂) အထွေအေထွ ဥပဒေများလည်း ရှိပါသေးသည်။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဇဟ် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေသများကို အမေး အဖြေ ပုံစုံဖြင့် အပိုင်း (၂) ကို အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်များ အတွက် ဖော်ပြ အပ်ပါတယ်။ မရ်ဂျာလေးပါး ၏ ဖသ်ဝါဓမ္မသတ်များ နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမရ်ဂျာ လေးပါးမှာ (၁) အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) (၂) အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အဘူလ်ကာစါအလ်ခဝီး (ရ.ဟ) (၃) အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (၄) အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၃) မေး ။ ။ လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ရိုဇဟ် မထားသည့် အတွက် ကဖ်္ဖရဟ် ကို သိပါရစေ ။
ဖြေ။ ။ လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ရိုဇဟ် မထားသည့် အတွက် ကဖ်္ဖရဟ် မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေ : ရိုဇဟ် မထားသည့် အခါ (သို့) ထားပြီး ဖျက်လိုက်သည့်အခါ မှာ အောက်ပါ အခြေ အနေအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တမင်တကာ လုပ်လျှင် သို့မဟုတ် မိမိသဘောအရ မိမိပြုလုပ်မည်၊ မည်သူကမျှ အတင်း အဓမ္မမပြုလျှင် သို့မဟုတ် မည်သည့် ခိုင်လုံသည့် ရှရီအီ အကြောင်း ပြချက် မရှိဘဲ ၊ ဥပမာ ရောဂါ စသည်ဖြင့်မရှိဘဲ ဆိုလျှင် ကဇွာလည်း ပြုရမည်။ ကဖ်္ဖရဟ်လည်းပေးရမည်။
အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်နှင့် ၊ မအ်စူမီးန် (အ.စ) မပြောသည့် စကားတစ် ခုခုကို ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောခြင်း ၊ ဤကဲ့သို့လုပ်လျှင် ရိုဇဟ်ပျက် ကြောင်း အသိမရှိချေ။
(၂၄) မေး ။ ။ လမြတ် ရမ်တွာန် ၏ ကဇွာ ရိုဇဟ် ကို ပျက်သည့် ကဖ်္ဖရဟ် အကြောင်း လေး ပြောပြပါ?
ဖြေ။ ။ လမြတ် ရမ်တွာန် ၏ ကဇွာ ရိုဇဟ် ကို ပျက်သည့် ကဖ်္ဖရဟ် အကြောင်း လေး မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ဆင်းရဲသားမိုအ်မင်၁၀ ဦးကို ဗိုက်အဝ ကျွေးရမည်။ (သို့မဟုတ်)
၎င်းတို့အား ၇၅၀ ဂရမ် တစ်နည်းအား ဖြင့် ၃ပေါင် ရှိ သည့် ဂျုံမှုန် (သို့) ဆန် (သို့) အခြားပေး ဆောင် ရပါမည်။(သို့မဟုတ်)
၎င်းတို့အား ၇၅၀ ဂရမ် တစ်နည်းအား ဖြင့် ၃ပေါင် ရှိ သည့်ဂျုံမှုန် (သို့) ဆန် (သို့) အခြား ပေးဆောင်ရပါမည်။
(၂၄) မေး ။ ။ ရိုဇဟ်အား ရွေ့ဆိုင်း အချိန် ဆွဲခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ကဖ္ဖ်ရဟ် လေးကို သိခွင့်ပေးပါ?
ဖြေ ။ ။ ရိုဇဟ်အား ရွေ့ဆိုင်း အချိန် ဆွဲခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ကဖ္ဖ်ရဟ် လေးမှာ အောက် ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
⌠ နောက်နှစ် လမြတ် ရမ်တွာန် ရောက်ဖို့ ၅ရက်သာ လိုတော့သည်။ ထားဖို့ ကဇွာရိုဇဟ် ကျန်တာကလည်း ကလည်း ၅ရက်ပါ။ ဇိုက် ရိုဇဟ် ထားဖို့လုပ်စဉ် အဖျားဝင်လာပြီး မထားနိုင်ပါ။
(၂၅) မေး ။ ။ဖေဒ်ယဟ် ဆိုတာလေး နှင့် ဗဒဲလ်ဆိုတာ လေးကို ရှင်းပြပါအုန်း ?
ဖြေ။ ။ ဖေဒ်ယဟ် နှင့် ဗဒဲလ် အကြောင်း ကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
(၂၆) မေး ။ ။ဖေဒ်ယဟ်ကို မည်သူ ပေးဆောင်ရမည်နည်း ?
ဖြေ ။ ။
အသက်ကြီးလာသည့် အဖွားအိုများ ရိုဇဟ်ထားရန် အင်အား မရှိ (သို့) ရိုဇဟ်ထားဖို့၎င်းအတွက် အလွန်တရာ အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်လာရမည်ဆိုလျှင် ၎င်းအပေါ်ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။ ၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်တိုင်းအစားဖေဒ်ယဟ် ပေး ဆောင်ရပါမည်။
အခြား အရေးကြီး အဖိုးတန် မည့် ကဏ္ဍ များကိုလည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရေအလွန် ငတ်သည့်ရောဂါ ရှိသူများ အနေဖြင့်ဆိုလျှင် ၎င်းတို့အတွက် ရိုဇဟ်ထားရန် အင်အား မရှိ (သို့) ရိုဇဟ်ထား ဖို့၎င်းအတွက် အလွန်တရာ အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင် ၎င်းအပေါ်ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်တိုင်းအစားဖေဒ်ယဟ် ပေးဆောင် ရပါမည်။
မွေးဖွားခါနီး ၊နီးလာချိန်အမျိုးသမီး နှင့် ရိုဇဟ် ထားခြင်း - မိခင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလျှင်
(သို့)ရင်သွေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ် ရှိလျှင် ၎င်းအတွက်ရိုဇဟ်ထားခွင့်မရှိ - နေ့တိုင်းအတွက် ဖေဒ်ယဟ်ပေး ရမည် - နောက်မှရိုဇဟ်ထားနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်လျှင်ကဇွာ ရိုဇာဟ် ထားရမည်။
၎င်း၏နို့နည်းပြီးမည်သည့် နို့ထိန်းသည်မှလည်း မရ၊ နို့ဗူးလည်း ကလေး အတွက် မသင့်လျှော်၊၎င်း ၏ ရိုဇဟ်ထားခြင်းအခြေအနေ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်မည်။
မိခင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလျှင်(သို့) ရင်သွေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ် ရှိလျှင် - ၎င်းအတွက် ရိုဇဟ်ထားခွင့်မရှိ - နေ့တိုင်းအတွက် ဖေဒ်ယဟ်ပေး ရမည် - နောက်မှရိုဇဟ်ထား နိုင် သည့် အခြေအနေသို့ရောက်လျှင်ကဇွာ ရိုဇာဟ် ထားရမည်။
ရောဂါကြောင့် ရိုဇဟ် မထားမည် ၊ နောက်နှစ် ရမ်တွာန်လမြတ် အထိ ရောဂါ နာတာရှည်နေမည် ဆိုလျှင် ၎င်းအတွက်ရိုဇဟ်ကဇွာ ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။ နေ့တိုင်း အတွက် ဖေဒ်ယဟ် ပေးရမည်။
ကျွန်တော် ဟီဂျရီ ၁၄၂၇ခုနှစ် လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ရိုဇဟ် ၅ရက် (နှင့်) ဟီဂျရီ ၁၄၂၈ ခုနှစ် လမြတ် ရမ်တွာန်၏ ရိုဇဟ် ၄ ရက် ထားဖို့ကျန်ပါတယ်။ဤ အခြေအနေမှာ အောက်ပါမေးခွန်း ကိုမေးလိုပါတယ်။
(ယနေ့ အမွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိသားစု အတွင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ အတွင်း ပြဿနာ တက်၊ရုံးရောက်နေသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖေအမေ (သို့) ပိုင်ရှင်မှ တရားဝင်သေတမ်းစာ မပြုခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ )
(၂၆) မေး ။ ။ ခရီးသည် နှင့် ဆိုင်သည့် ရိုဇဟ် အကြောင်းလေးလည်း ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ခရီးသည် နှင့် ဆိုင်သည့် ရိုဇဟ် အကြောင်းလေး မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅ - အကယ်၍ ခရီးသည် အနေဖြင့် ဇဟိုရ် မတိုင်မီနေရပ်ကိုပြန်ရောက် မည်။ သို့မဟုတ်၁၀ရက် အထိနေရမည့် နေရာ သို့ ရောက်သွားမည်ဆိုလျှင် - ၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေ သည့် အရာ တစ်ခုခုကိုမလုပ်ထား လျှင်ရိုဇဟ် ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါ သည်။အကယ် ၍ ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာတစ်ခုခုပြုထားမည်။(သို့မဟုတ်)ဇဟိုရ်ပြီးမှရောက်မည်ဆိုလျှင်ထို့နေ့ ရိုဇဟ် ထား၍ မရချေ။ ပြီးမှ ကဇွာ ရိုဇဟ် ထားရပါမည်။
၂ -နီယသ် • ကိုရ်ဘသန်အေလ္လာဟ်( قربةًاِلی الله)၊အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်
• နီယသ် အဓိဋ္ဌာန်၊ရည်ရွယ်ချက် ၏အမည် ဖြစ်ပါသည်။
• နှုတ်မှ စကားစု ကို ပြောရန် အရေးမကြီးချေ။
• အဲအ်သေကာဖ် ရိုဇဟ်မရှိဘဲ ထိုင်မရချေ။
• လမြတ်ရမ်တွာန် ၏ ရိုဇဟ် လား၊ အခြားလများ တွင်ကဇွာ
(ခ) မစ်္စဂျစ်ဒ်ဒေနဗဝီ (ကိုယ်တော်မြတ်9၏ ရောင်ဇာရှိသည့်ဗလီ)
• အဲအ်သေကာဖ် အစ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဖဂျရ်အဇါန်မှ စတင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
• အဲအ်သေကာဖ် သောကြာမရ်ရိဗ် အချိန် တွင် ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်ပါသည်။
• တစ်နည်းအားဖြင့် နေ့ ၃ ရက် ည ၂ည မစ္စ်ဂျစ်ဒ်တွင် နေထိုင်ရမည် ဖြစ် ပါ သည်။
(က) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (ဖဂျရ်အဇါန် မှစမည်)
(ဂ) သောကြာနေ့( မဂ်ရိဗ်အချိန်တွင်ပြီးဆုံး) ဆိုလျှင် အချိန်ပြည့် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် တွင် နေထိုင်ရန် အရေး ကြီးပါသည်။
• တတိယရက် စပြီးနောက် အဲအ်သေကာဖ် ပျက်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။
• ထိုနည်းတူစွာ၎ရက်မြောက်နှင့် ၅ ရက်မြောက်နေ့ တွင် ပျက် ပိုင်ခွင့်
(ခ) မိမိသဘောဆန္ဒ အရ ဆိုလျှင် အဲအ်သေကာဖ် မပိုင်ချေ။ပြဌာန်းချက်ို သိသိဖြစ်စေ။ မသိ သည်ဖြစ်စေ။
• အကယ်၍ စားဖို့သောက်ဖို့ မဝယ်မဖြစ်အခြေအနေတွင် ခွင့်ရှိပါသည်။
ဖြေ- ဂိုက်ဗသ် သေ အေမာမ်ဇမာန်း4တွင် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ပါ။ မွတ်စ် သဟဗ် ဖြစ်ပါသည်။
(က) လမြင်ပြီး - •မနက်ဖန်ရှောင်ဝလ်လ၏ပထမရက်•အီးဒ်လုပ်ရမည်•ရိုဇဟ်ထားခြင်းဟရာမ်
(ဂ) လမြင်၊ မမြင်မသိပါ ဆို လျှင် - •မနက်ဖန်ရမ်တွာန်လမြတ်၏၃၀ရက်
ဖြေ - ၃ကီလိုဂရမ် ဂျုံ သို့မဟုတ် ၎င်း၏တန်ဖိုး (သို့) ၃ကီလိုဂရမ် ဆန် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ တန်ဖိုး ကို ထုတ်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) မရှိဆင်းရဲသား ဖြစ်ရမည်။ (မရှိဆင်းရဲသားဆိုတာ မေးခွန်း အမှတ်၁ ၏ အဖြေတွင်ပေါ်ပြပြီးပါပြီ။
ဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ